संसद विघठन बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति — Imandarmedia.com
संसद विघठन बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान बमोजिम बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम भएको जनाएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने, लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको जनाएको छ ।
महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनतालाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार चाहिएको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको जालझेलपूर्ण कदम नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्थाविरुद्धको प्रहार हो ।’
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पछिल्लो दुई दिनमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले यस अघि नै असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिसकेको छ ।’
महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुँदा त्यो प्रहार रोक्न संविधानको संरक्षक मानिने सम्मानीय राष्ट्रपति संस्थासंग आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरे : देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शनिबार देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम भएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
संविधान विरोधी तानाशाही कदमको प्रतिवाद गरौं : झलनाथ खनाल
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा संविधान विरोधी काम भएको बताएका छन् । शनिबार खनालले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुको सो कदम कदापि क्षम्य नहुने उनको भनाई छ । साथै सो कदमको घोर भर्त्सना गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न खनालले आग्रह गरेका छन् । नेता खनालले भनेका छन्– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको छ ।
यो कदम कदापि क्षम्य हुने छैन । यो संविधान विरोधी, प्रतिगामी तानाशाही कदम हो । यस कदमको म घोर भर्त्सना गर्दछु र प्रतिवादका लागि सबै देशभक्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछु ।’
ओली र विद्या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इसारामा नाचे, नेपाल प्रयोगशाला भइरहेको छ- देव गुरुङ
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नुमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको बताएका छन् । केपी ओली अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि परेको दाबीलाई बिनाआधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर संसद् विघटन चुनाव गर्न नभई संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने षडयन्त्रअनुसार भएको बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा नाचेको समेत आरोप लगाए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा यिनीहरू नाचेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशाला भइरहेको छ नेपाल ।’ उनले भने । अन्तराष्ट्रिय शक्तिको इशारामा नाचेको बताए पनि ठ्याक्कै कुन शक्ति त्यो भने उनले भन्न चाहेनन् ।
नेपालमा क-कसले के क-सरी हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको विषय उनको भनाइ छ । ओली र विद्याको यो कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै उनले अगाडि थाले- ‘यो असंवैधानिक र संविधानविपरीत कदम भएको हो । संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले यसलाई समर्थन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकिँदैन ।’
दोस्रो पटक संसद बिघटनले नेपालको संविधान सिध्याउने, समाप्त गर्ने, खारेज गर्ने षड्यन्त्र विधिवत् सुरुवात हुँदैछ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको उनले बताए । ‘किनभने सदन समाप्त गर्नेबित्तिकै संविधानका सबै धारा, उपधारा सबै निष्क्रिय हुन्छन् । अब राष्ट्रपतिको अध्यादेशको आधारमा देश चलाउन खोजिँदैछ । संविधान अध्यादेशमा जानु भनेको संविधान निष्क्रिय हुनु हो ।’ नेता गुरुङले भने ।
यस्तै संविधान निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन नहुने उनको तर्क छ । ‘ संविधान निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन हुँदैन । निर्वाचन नभएपछि यो संविधान विफल भयो भन्ने बहाना हुन्छ । त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुहरूका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेर मात्रै संविधानलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगिँदैछ । त्यो तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
हिन्दुराज्य कामय राख्ने कि ? धर्मनिरपेक्ष राख्ने कि ? सङ्घीयता राख्ने कि नराख्ने के गर्ने भन्ने विषयको तयारी भइरहेको नेता गुरुङको बुझाई छ । ‘त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्दा धाँधली, तिक्डम र षड्यन्त्र गरेर संविधानको अन्तरवस्तु के बनाउनुपर्ने छ, त्यो गराउने र संविधान संशोधन गराउने योजना हो । अन्तरवस्तु २०४७ सालको संविधान फर्काउने हो । रूप २०७२ को संविधान तर सार २०४७ को बनाउने योजनामा यो सबै षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
यो असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले कानुनी उपायहरूको खोजी पनि गर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा यो निर्णयको विरोध गर्दै भण्डाफोर गर्ने हो । असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि कानुनी उपायहरूको खोजी पनि हुन्छ ।’ उनले भने-‘ कानुनी उपचारमा जाँदा अदालतबाट केकस्तो न्याय मिल्छ त्यो दोस्रो कुरा भयो । अरू बाँकी कदमका बारेमा संविधानका पक्षधरबीचमा एक प्रकारको गठबन्धन छ, त्यसमा छलफल, परामर्श गर्दै निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव